Hugari hweSt. Kitts naNevis Passport yeSt Kitts naNevis
Hugari hweSt. Kitts naNevis - Sustainable Growth Fund (SGF), Mumiriri mumwe
Citizenity of St. Kitts naNevis - Sustainable Growth Fund (SGF) mhuri
Ugari hweSt. Kitts naNevis - Real estate Investment, mhuri
Ugari hwemuSt. Kitts naNevis • Sarudza BASA
Dhipatimendi reSt Kitts uye vagari veNevis
Zvakanakira Saint Kitts uye Nevis ugari
Kitts uye Nevis Citizenship neInvestment Chirongwa inoonekwa seimwe yevanonyanya kuzivikanwa. Pasipoti yenyika ino ichava sarudzo yakanaka kune avo vanoda kuwana mukana wekushanyira nyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu vasina vhiza (kusanganisira dziya dzeEU neUK), pamwe nekukwiridzira mutero. Pakati pezvimwe zvakanakira chirongwa cheStart Kitts chekudyara kuva mugari ndeye kukurumidza kugadzirisa nguva, kusavapo kwemamiriro ekugara munyika, pamwe nekuvimbiswa kwekuvanzika.
Ndezvipi zvinodiwa kune vanoita mari?
Zera Kuteerera (18+)
Mikana yekusimbisa chokwadi chepamutemo chekugamuchira mari
Kubudirira kwakakodzera kushingairira
Pamwe chete nemusimari, zvinokwanisika kuburitsa pasipoti yevana (zera ravo harifanirwe kupfuura makore makumi matatu), mukadzi, hama nehanzvadzi (pasi pemakore makumi matatu), vabereki (vanopfuura makore makumi mashanu nemashanu). Panguva imwecheteyo, iwo akanyorwa zvikamu (kusanganisira vana vanopfuura makore gumi nemasere ekuberekwa) vanofanirwa kutarisirwa nemari kune investor.
Mari isingadzoreke. Iko kushomeka kushoma kwekutsvaga iyo Saint Kitts pasipoti uchishandisa nzira iyi zviuru zana nemakumi mashanu emadhora ekuUS. Kana ugari hwemo hunofanirwa kuwanikwa kwete chete nemusimari iye pachake, asiwo nevanodarika vatatu vanovimba, imwezve muripo wezviuru gumi zvemadhora ekuAmerica inodiwa kwavari.
Kutenga kwezvivakwa. Iyi sarudzo yekutora pasipoti yeSaint Kitts neNevis inosanganisira kutenga zvivakwa muhuwandu hwemazana mazana mana emadhora ekuAmerica, zvichitungamirwa nehunhu hwezvinhu zvakawanikwa kwenguva inosvika makore mashanu. Izvo zvakare zvinokwanisika kuisa mari zviuru mazana maviri emadhora ekuAmerica, asi mune ino kesi zvichakwanisika kutengesa chinhu chete mushure memakore manomwe. Rondedzero yezvinhu zviripo zvekutengwa pasi pechirongwa chekudyarwa kwehugari inogamuchirwa nehurumende.